ထုတ်ကုန်များ > 4-Chloroquinazoline (5190-68-1)
CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 4-Chloroquinazoline (5190-68-1) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
4-Chloroquinazoline (5190-68-1) ကဗီဒီယို
4-hetroaryl ၏အသစ်စီးရီး quinazolines pentafluoro (chloro) pyridine နှင့် 2-အစားထိုး quinazolinone ၏တုံ့ပြန်မှုကဒီဇိုင်းနှင့်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်အစားထိုး။ quinazolinone နှင့်အတူ pentafluoro (chloro) pyridine ၏မွှေးကြိုင် nucleophilic အစားထိုး quinazolinone ၏အောက်စီဂျင်ဆိုဒ် (O-ဗဟိုပြု nucleophile) က pyridine လက်စွပ်၏ 4-position မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်ဒြပ်ပေါင်းများ၏အဆောက်အဦမှာ IR, 1H NMR, 19F NMR နှင့် 13C NMR spectroscopy အဖြစ်ကို elemental ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
ဖန်တီးအနကျအဓိပ်ပါယျအများစုမှာငါးလူ့အကျိတ်ဆဲလ်လိုင်းများဆန့်ကျင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ antiproliferative လှုပ်ရှားမှုများမှအလယ်အလတ်ပြ။ compound 8d 431-549 ၏အကွာအဝေးအတွင်း IC480 တန်ဖိုးများနှင့်အတူ (အကျိတ်ရိုင်းအမျိုးအစား (A827, A1975 နှင့် SW50 ဆဲလ်) ဖော်ပြဆဲလ်သို့မဟုတ် Mutant (HCC0.37 နှင့် NCI-H4.87 ဆဲလ်) epidermal growth factor receptor (EGFR) ဆန့်ကျင်အရှိဆုံးထူးခြားတဲ့ inhibitory လှုပ်ရှားမှုများပြသ μM) အဖြစ်အသီးသီး 790 နှင့် 50 nm ၏ IC7.0 တန်ဖိုးများနှင့်အတူ recombinant EGFR tyrosine kinase (EGFR-TK, wt သို့မဟုတ် T9.3M ဆန့်ကျင်ကပိုအစွမ်းထက် inhibitory သက်ရောက်မှု) (,) ။ မော်လီကျူး docking 8d EGFR နှင့်အတူလေးဟိုက်ဒရိုဂျင်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်, သူတို့နှစ်ခု EGFR ၏ Asp855-Phe856-Gly857 (DFG) motif တည်ရှိသောခဲ့ပြသခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်း 8d သိသိသာသာလူ့ NSCLC ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ EGF-သွေးဆောင် EGFR activation နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Akt နှင့် Erk1 /2အဖြစ်ယင်း၏မြစ်အောက်ပိုင်းပရိုတိန်း၏ phosphorylation ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကမကထပြုခဲ့ဆဲလ် apoptosis နှင့် A8 ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ G0 / G1-အဆင့်ဆဲလ်သံသရာတိုးတက်မှု၏ကြာရှည် 549d ။ အဆိုပါအလုပျကပိုအစွမ်းထက် EGFR tyrosine kinase inhibitors (TKIs) ၏နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်။
4-Chloroquinazoline (5190-68-1) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
MDL အရေအတွက် MFCD00228682
InChI Key ကို GVRRXASZZAKBMN-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 164.6
အပြုံး C1 = CC ကို = C2C (= C1) ကို C (= NC = N2) □
အရောင် အလင်းအဝါရောင်အရည်မှ Clear ကိုအရောင်
အရည်ပျော်မှတ် 96-100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
4-Chloroquinazoline (5190-68-1) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
မျိုလျှင်♦: ချက်ချင်းပင်တစ်ဦးအဆိပ်ရေးဗဟိုဌာနသို့မဟုတ်ဆရာဝန် / ဆရာဝန်ခေါ်ပါ။
IN မျက်လုံးများ IF ♦: မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့ရေနှင့်အတူသတိဆေး။ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ပြုပါရန်လွယ်ကူလျှင်, မျက်ကပ်မှန်ဖယ်ရှားပါ။
4-Chloroquinazoline (5190-68-1) ဆောင်းပါးများ
Pentafluoro နှင့်အတူတချို့ကအစားထိုး Quinazolinones ၏စစ်တမ်း reactivity (chloro) pyridine
4-hetroaryl ၏အသစ်စီးရီး quinazolines pentafluoro (chloro) pyridine နှင့် 2-အစားထိုး quinazolinone ၏တုံ့ပြန်မှုကဒီဇိုင်းနှင့်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်အစားထိုး။ - Heterocyclic ဓာတုဗေဒ 2018 vol ၏ [Journal မှ။ 55 #2စ။ 475 - 480]
အကျိတ်ဆဲလ်များကိုဆန့်ကျင်တိုးမြှင် antiproliferative လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူအစွမ်းထက် EGFR inhibitors အဖြစ် 6,7-Dimorpholinoalkoxy quinazoline အနကျအဓိပ်ပါယျ
ဖန်တီးအနကျအဓိပ်ပါယျအများစုမှာငါးလူ့အကျိတ်ဆဲလ်လိုင်းများဆန့်ကျင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ antiproliferative လှုပ်ရှားမှုများမှအလယ်အလတ်ပြ .- [ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒ 2018 vol ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 147 စ။ 77 - 89]
4-Chloroquinazoline (5190-68-1) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 4-Chloroquinazoline (5190-68-1)
သငျသညျအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကြောင်း 4-Chloroquinazoline 5190-68-1 ၏ကြီးမားသောသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ပမာဏနှင့်အတူထောက်ပံ့ခံရဖို့လိုအပ်ပါသလား အဘယ်သူမျှမနောက်ထပ်မကွညျ့, ငါတို့မှာ APICMO သည်အခြားများစွာသောဓာတုပစ္စည်းအကြားအမြောက်အမြား 4-Chloroquinazoline, synthesize ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ထုတ်လုပ်။
ကျနော်တို့တင်းကြပ်စွာအားလုံးအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအပေါ် CMPG စည်းမျဉ်းအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းညီအမျှအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။
4-Chloroquinazoline quinazolines ၏အတန်း၌တည်ရှိ၏။ ဒါကြောင့်ဆေးဖက်ဝင်ဓာတုဗေဒမှကြွလာသောအခါ Quinazolines အလွန်အရေးပါလှပေသည်။ သူတို့ကကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ် heterocyclic ဒြပ်ပေါင်းများအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ Quinazolines အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်သူတို့ကို enable ကြောင်းကျယ်ပြန့်ဇီဝဂုဏ်သတ္တိအားအပိုင်; ထို့အပြင် Anti-inflammatory, Anti-ဖန်းဂတ်စ်, Anti-ဘက်တီးရီးယား, Anti-တီဘီ, Anti-ဗိုင်းရပ်စ်, Anti-ငှက်ဖျား, Anti-ကင်ဆာ, Anti-ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့်တစ်ဦး analgesic နိုင်စွမ်းရှိသည်။
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
[စာတန်းထိုး id = "attachment_724" align = "alignnone" width ကို = "600"] 4-Chloroquinazoline အမှုန့် (5190-68-1) -APICMO [/ caption]
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 Applications ကို
5190-68-1 သာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုရပါမည်။ အပြင်ကတင်းကြပ်စွာကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်အသုံးပြုသောခံရဖို့ပါပဲ။ 4-Chloroquinazoline 5190-68-1 နာမ်
အဲဒီမှာအားလုံး 4-Chloroquinazoline 5190-68-1 ရည်ညွှန်းအမျိုးမျိုးသောအမည်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ပါဝင်သည်; 4-Chlorchinazolin, 4-Chloroquinazoline, Quinazoline, 4-chloro- (8CI) (9CI), 4-Chloro quinazolines, Quinazoline, 4-chloro, 4-chloro-quinazoline အများအပြားကပို။
4-Chloroquinazoline ကဲ့သို့တူညီသောအမျိုးအစား၌ရှိ၏ heterocyclic အဆောက်အဦလုပ်ကွက်, ဓာတုပေါင်းစပ်, halogen heterocycles, အဆောက်အဦလုပ်ကွက်များနှင့် quinazolines ။
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 ဓာတုနှင့်ကာယ Properties ကို
C8H5CIN2 တစ်ဦးမော်လီကျူးပုံသေနည်းထားရှိခြင်း, 5190-68-1 164.014 g / mol နှင့် 164.592 g / mol တစ်ဦးမော်လီကျူးအလေးချိန်တစ်ခုအတိအကျကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ဦးကိုမွှေးကြိုင်ကွင်းနှင့် 1.349 g / cm3 တစ်သိပ်သည်းဆရှိပါတယ်။
အဆိုပါအရည်ပျော်မှတ် 96 mmHg မှာ 100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၏ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်နှင့်အတူ 281-760 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေနေကြပါတယ်။ အဆိုပါမျက်စိအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း 1.662 ၏ 25.78000 နှင့် PSA ဖြစ်ပါတယ်။
5190-68-1 အရည် form မှာလာအရောင်ကိုအဝါရောင်အလင်းအရောင်ရှင်းပါတယ်။
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 Synthesis လမ်းကြောင်း
5190-68-1 များမှာအချို့သောအရာ၏ 11 ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများအတွက်ဖန်တီးစေခြင်းငှါ,
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 computing Properties ကို
Topological Surface ကဧရိယာ 25.8A ^ 2
covalent ဘွန်းယူနစ်အရေအတွက် 1
Monoisotopic Mass (ဆ / mol) 164.014
CACTVS Substructure Key ကိုလက်ဗွေ AAADCYBZAAAEAAAAAAAAA
undefined Atom စတီရီယိုစင်တာအရေအတွက် 0
undefined ဘွန်းစတီရီယိုစင်တာအရေအတွက် 0
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 ကျန်းမာရေးဘေးအန္တရာယ်
အရေပြားနဲ့ 4-Chloroquinazoline ၏တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်အသားအရေယားယံခြင်းနှင့်ချေးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင်ဤထုတ်ကုန်ကိုင်တွယ်နေကြသည်အခါတိုင်းအကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုသုံးပါ။
ကမျိုရဲ့လျှင်မျိုချမိသည့်အခါ 5190-68-1 အဆိပ်အတောက်ဖြစ်နိုငျသညျ, ဆိုးဝါးဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သည့်အခါစား, အရက်သောက်သို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းစိတ်ဆိုးနဲ့တိကျတဲ့ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို၏အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပေါ်စေအဖြစ် 4-Chloroquinazoline ရှူသို့မဟုတ်အသက်ရှူမထားပါနဲ့။ အသက်ရှူသို့မဟုတ်ရှိုက်တဲ့အခါမှာကအဲယားဝေးထဲသို့ဝင်လျှင်ဆိုးဝါးဖြစ်နိုင်သည်။
4-Chloroquinazoline များအတွက်အလားအလာအထူးအန္တရာယ်များပါဝင်သည်; ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်။
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 ရှေးဦးသူနာပြုဆောင်ရွက်ချက်များ
သင်၏မျက်စိမတော်တဆ 5190-68-1 နှင့်အဆက်အသွယ်ရခဲ့လျှင်, ရေကိုတစ်ဦးလုံလောက်သောငွေပမာဏနှင့်အတူရှင်းလင်းရန်မှအလျင်တဆောဖြစ်လိမ့်မည်။ စေ့စေ့စပ်စပ်ရေဆေးသေချာစေရန်အချိန်ဖို့အချိန်ကနေဒီဓာတ်လှေကားအထက်နှင့်အောက်မျက်ခမ်းလုပ်နေတာနေစဉ်။
တိုက်ရိုက်အသားအရေအဆက်အသွယ်သင်သည်မည်သည့်ညစ်ညမ်းအဝတ်အစားနှင့်ဖိနပ်ကိုဖယ်ရှားအဖြစ်အကြောင်းကို 15 မိနစ်များအတွက်ပျော့ဆပ်ပြာသုံးပြီးရေ copious ပမာဏနှင့်အတူဘေးဒဏ်သင့်အသားအရေဆေးကြောပါ။ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဆေးဝါးကုသကိုရှာတစ်ခုသို့မဟုတ်အဆိပ်စင်တာကိုခေါ်ပါ။ ပြန်သုံးရှေ့တော်၌ထိုညစ်ညမ်းအဝတ်နှင့်ဖိနပ်ကိုလျှော်ဖို့သတိရပါ။
4-Chloroquinazoline မှုတ်သို့မဟုတ်ရှိုက်လျှင်ချက်ချင်းထိတွေ့မှုကနေသားကောင်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေတစ်ခုသို့မဟုတ်ကောင်းကောင်းလေဝင်လေထွက်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူတစ်ပွင့်လင်းသောဧရိယာမှသားကောင်ကိုယူခဲ့။ လွယ်ကူသောအသက်ရှူခွင့်ပြုပါရန်ကွာပိတ်ဆို့မှုကိုကနေအဆင်ပြေရာဌာန၌သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ချထားပါ။
သငျသညျအသက်ရှူခက်ခဲသည်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ထားပြီးဘယ်မှာအတုအသက်ရှူစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ ဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ဘယ်မှာပါးစပ် resuscitation မှပါးစပ်ကြိုးစားမှဘယ်တော့မှသတိရပါ။ နောက်ဆုံးဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်; သငျသညျလညျးအဆိပ်စင်တာခေါ်နိုင်ပါတယ်။
သင်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးမတော်တဆ 4-Chloroquinazoline သုံးစွဲသို့မဟုတ်မျို အကယ်. အကြောင်း 15 မိနစ်ရေများများနှင့်အတူနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှုတ်တော်ထွက်အသုတ်ခြင်း။ ဒီကပိုအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေသကဲ့သို့သင်တို့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်ဦးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကအကြံပြုကြသည်မဟုတ်လျှင်အန်သွေးဆောင်ကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 ကိုင်တွယ်မှုနှင့်သိုလှောင်
5190-68-1 တင်းကြပ်စွာတဲ့ professional ကျွမ်းကျင်သူများကသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အနီးကပ်ပြဌာန်းချက်အောက်တွင်သတိနဲ့ကိုင်တွယ်ရပါမည်။ ကိုင်တွယ်ရတဲ့အခါ, ပေး data တွေကိုစာရွက်ထဲမှာညွှန်ပြအဖြစ်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်, မီးနှင့်ဓာတုအန္တရာယ်စဉ်းစားရန်သတိရပါ။
မျက်လုံးဒီထုတ်ကုန်နှင့်အတူမည်သည့်အဆက်အသွယ်မှသင်၏မျက်စိနှင့်မကျြနှာကိုကာကွယ်ပေးမယ့်မျက်နှာဒိုင်းလွှားနှင့်အတူဓာတုပစ္စည်းခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်ကြောင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးတူသော shields ။
စိန်ခေါ်သို့မဟုတ်ဤဓာတုနှင့်အတူမည်သည့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ကနေသင့်ရဲ့လက်အားကာကွယ်တားဆီးဖို့အသုံးမပြုခင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ဖြစ်ကြောင်း impervious လက်အိတ်ဝတ်ဆင်။ အဆိုပါလက်အိတ်ဓာတုပစ္စည်းမှခံနိုင်ရည်ဖြစ်သင့်သည်။ အမြဲတမ်းသူ့ရဲ့အပြင်ထိအတူဂရုတစိုက်လက်အိတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်သတိရပါ။ အဆိုပါဒေသခံဒေသတွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးစည်းမျဉ်းလိုက်နာမှုအတွက်အသုံးပြုသောလက်အိတ်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
သငျသညျ 2-Chloroquinazoline အသက်ရှူသို့မဟုတ်ရှူကြဘူးသေချာစေရန်အမျိုးအစား P4 အသက်ရှူကိရိယာသည့်အရာတစ်ခုသို့မဟုတ်အတည်ပြုမျက်နှာဖုံးကိုသုံးပါ။
ဒီထုတ်ကုန်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါမွမှေုနျ့နှငျ့ Aerosol ဖွဲ့စည်းရှောင်ကြဉ်ပါ။ တစ်ဦးဖုန်မှုန့်မျက်နှာဖုံးနှင့်သင်၏နှာခေါင်းဖုံးအုပ်ထားပါ။ အမြဲတမ်းဒီဓာတုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါဓာတုအငွေ့ပါးပျဉ်းကိုသုံးပါနှင့်ဧရိယာကိုကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမခံပါသည်။
သငျသညျအားလပ်ချိန်အဘို့နှင့်သင်၏လုပ်အားခရဲ့အဆုံးမှာ go မတိုင်မီအမြဲတမ်းသင်၏လက်ဆေးကြောပါ။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအဘို့ဤထုတ်ကုန်ကိုင်တွယ်ပြီးနောက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆေးကြောပါ။
5190-68-1 ရေရေနုတ်မြောင်းသို့မဟုတျရှံ့လိုင်းများသို့စီးဆင်းခွင့်ပြုပါဘယ်တော့မှမ။ spillage ၏အမှု၌, ထို့နောက်ရေတွင်းတစ်တွင်း-label တပ်ထားသောကွန်တိန်နာသို့စုဆောင်းစွန့်ပစ်ခြင်းမပြုမီတင်းကျပ်စွာပိတ်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောသဲလုံးနှင့်အမျှအာဂွန်စုပ်နဲ့အတူဒီထုတ်ကုန်ရောမွှေပါ။
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 သိုလှောင်
တင်းကျပ်စွာကွန်တိန်နာပိတ်ပြီးဝေးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လုံခြုံရာအရပျ၌ထသော့ခတ်။ လုံလောက်သောလေဝင်လေထွက်ရှိကြောင်းတစ်ဦးအေးမြခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်သိမ်းဆည်း။ အစောပိုင်းကညွှန်ပြသည့်အတိုင်း, ထိုကဲ့သို့သောဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်, ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသောလောင်ကျွမ်းခြင်းပစ္စည်းများပယ်စောင့်ရှောက်လော့။
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 မီးသတ်ဆောင်ရွက်ချက်များ Fighting
အမှုအခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အတွက်ဖြစ်စေဒီထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မီးထွက်ချိုးတော်မူ၏ သငျသညျမီးတိုက်ခြင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်မပြုမီသင်အတည်ပြုအကာအကွယ်ဂီယာနှင့် Self-ပါရှိသောအသက်ရှူယန္တရားပေါ်တွင်တင်အာမခံပါသည်။
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်, သွေ့ခြောက်သောအမှုန့်, အရက်-ခံနိုင်ရည်မြှုပ်သို့မဟုတ်ရေမှုန်ရေမွှားကိုသုံးပါ။ ဒီထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မီးငြိမ်းအေးဖို့ရေဂျက်ကိုသုံးပါဘယ်တော့မှမ။ အမြဲတမ်းမီးကိုချွတ်ချပြီးတဲ့အခါသင်လုံခြုံအကွာအဝေးကိုစောင့်ရှောက်အာမခံပါသည်။
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 ရှင်းဆောင်ရွက်ချက်များ
အားလုံးဒေသခံဒေသတွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးစည်းမျဉ်းများဘက်ကလိုက်လျောညီထွေအထူးစွန့်ပစ်အဖြစ်ဒီထုတ်ကုန်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ သင်သည်သင်၏ဒေသခံစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းအခွင့်အာဏာတိုင်ပင်ပြီးနောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီစုဆောင်းခြင်းများအတွက်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်, သင် flue ဓာတ်ငွေ့နှင့်တစ်ဦး scrubber တပ်ဆင်သောထိန်းချုပ်ထားမီးရှို့ဖျက်ဆီးထဲမှာဒီထုတ်ကုန်ကိုမီးရှို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမတော်တဆမှုရှောငျလှဲဖို့လောင်ကျွမ်းနိုင်သောရဲ့အဖြစ်ဒီထုတ်ကုန်စတငျခဲ့သညျသည့်အခါသတိထားပါ။
မဆိုအသုံးမပြုတဲ့ဓာတုမဆိုပိုလျှံပယ်ရှားပေးပါ။ သုံးဆပြန်လည်နှင့် reconditioning များအတွက်အချည်းနှီးသောကွန်တိန်နာသုတ်ခြင်း။ သင်တို့သည်လည်းထို့နောက်သန့်ရှင်းဖို့မြေအတွက်သူတို့ကိုများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးအနာဂတ်အသုံးပြုမှုအဘို့ထိုသူတို့အသုံးမပြုနိုင်စေရန်ဗလာကွန်တိန်နာဖောကျဖို့ရွေးချယ်လိမ့်မည်။
4-Chloroquinazoline တည်ငြိမ်ရေးနှင့် reactivity
အကြံပြုထားတဲ့အခြေအနေများမှာသိမ်းဆည်းထားသည့်အခါ 5190-68-1 ယေဘုယျအားဖြင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ မီးစများ၌၎င်း, မီးလျှံများနှင့်အပူထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောနိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်နှင့်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသောလောင်ကျွမ်းခြင်းထုတ်ကုန်ပယ်ထားပါ။
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်
သင့်လျော်သောသင်္ဘောအမည်ဖြင့်အဆိပ်အစိုင်အခဲ, အော်ဂဲနစ်, N_O_O_ (4-Chloroquinazoline) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ Group မှ III ကိုထုတ်ပိုး, အတန်းအစား 6.1 အတွက်င်နှင့်ကုလသမဂ္ဂနံပါတ်ကုလသမဂ္ဂ 2811 ဖြစ်ပါတယ်။
4-Chloroquinazoline 5190-68-1 စည်းမျဉ်းပြန်ကြားရေး
ဒီပစ္စည်းအားလုံးဓာတုပစ္စည်း Sara ခေါင်းစဉ် III ကိုပုဒ်မ 302 သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းများအစီရင်ခံဖို့ဘာသာရပ်မရှိကြပေ။ သူတို့ရဲ့ CAS နံပါတ်များကို Sara ခေါင်းစဉ် III ကိုပုဒ်မ 313 အားဖြင့်သာတည်အဆင့်ဆင့်သတင်းပို့တံခါးခုံထက်မပိုပါဘူး။
Apicmo မှာကျနော်တို့အလွန်အမင်းအရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ကြပြီးဓာတု Synthesis, ဘဝကသိပ္ပံ, Analytical သိပ္ပံ, ပစ္စည်းသိပ္ပံ, Chromatography နှင့်များစွာသောပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိသည်သောကျွမ်းကျင်သူများကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအတွက်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ။
သငျသညျသုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးရေးသို့မဟုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် 4-Chloroquinazoline 5190-68-1 အမြောက်အမြားလိုအပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်ဖော်ရွေဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းနှင့်အတူထိတွေ့ရ, ကြှနျုပျတို့တိကျစွာနှင့်အဖြစ်မကြာမီသင်ကလိုအပ်သကဲ့သို့သင်၏အမိန့်ကိုမကယ်မလွှတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဟာမ, Young က Jin က; Lee က, Duck-Hyung; Choi, Hwan Geun; Hah, Jung-Mi; sim, Taebo Tetrahedron ပေးစာ, 2010, vol ။ 51, # 35 စ။ 4609 - 4611
Myers မိုက်ကယ် R ကို .; Setzer, နာတာလီ N ကို .; Spada, အဲဖရက် P ကို ​​.; Zulli, Allison L ကို .; Hsu, ချင်း-ရီဂျေ .; Zilberstein, အာရှာ; ဂျွန်ဆင်, Susan အီး .; ချိတ်, လင်ဒါ E ကို .; Jacoski, မာရိ V. Bioorganic, နှင့်ဆေးဝါးဓာတုဗေဒပေးစာ, 1997, vol ။ 7, #4စ။ 417 - 420
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, PubChem ၏အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, 4-Chloroquinazoline, 5190-68-1 ကဏ္ဍများ 1-9 ။